शैक्षिक तथा धार्मिक महोत्सवमा रु १ करोड ९० लाख बढी रकम संकलन ! महोत्सव पूर्ण रुपमा सफल -नेपाली : महोत्सव सफल पार्न सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद – अर्याल – ebaglung.com
२०७५ मंसिर २२, शनिबार ०६:५६	Footer Slider, Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
महोत्सवका सबै कार्यक्रमहरुको रात्रिकालीन सभामा भव्य रुपमा समापन !
लोकेन्द्र निरासी, बुर्तिवाङ २०७५ मंसिर २२ । बुर्तिबाङमा सञ्चालित बागलुङ ढोरपाटन शैक्षिक तथा धार्मिक महोत्सवको हिजो अन्तिम सातौं दिनमा मात्र २० लाख ७८ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ दान सहयोग रकम उठेको छ । महोत्सवमा हिजो अन्तिम दिनको रात्रिकालीन समापन समयसम्म कुल १ करोड ९० लाख बढी रकम संकलन भएको आयोजकले जनाएको छ । महोत्सवका सबै कार्यक्रमहरु हिजै रात्रिकालीन समयमा समापन गरिएकोे छ । महोत्सवको अन्तिम हर हिसाब आजमात्र अन्तिम गरी सार्वजनिक गरिने बताइएको छ ।
महोत्सवको समापन कार्यक्रममा ढोरपाटन नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार नेपालीको प्रमुख आतिथ्यता रहेको थियो । प्रमुख अतिथि नेपालीले शैक्षिक विकासमा सबै एक भएर हातेमालो गर्नुपर्ने बताउँदै महोत्सव पूर्ण रुपमा सफल भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिएका थिए ।
त्यसैगरी समापन कार्यक्रममा बोल्दै निसीभूजी जनता क्याम्पस व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष तथा महोत्सव मुल समारोह समितिका अध्यक्ष चन्द्रलाल अर्याले महोत्सवबाट उठेको सम्पूर्ण रकमको हर हिसाब गरि सार्वजनिक गरिने बताउँदै महोत्सव सफल पार्न सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका थिए ।
कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथी, पण्डित गुरुहरु लगायत अतिथिहरुलाई दोसल्ला ओढाएर कदर पत्रले सम्मान गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा तमानखोला गाउँपालिकामा जन्म भई हाल काडमाडौ निवासी समाजसेवी युवा उद्यमी झक शर्मालाई महानायकको रुपमा आसनग्रहण गराइएको थियो । उनले महोत्सवलाई ४ लाख ५ हजार ५ सय ५५ रुपैयाँ दान रकम सहयोग गरेका थिए ।
समापन कार्यक्रममा सह निर्देशक तुल्सीराम अर्याल, झक शर्मा, शैक्षिक अभियनता एवं संकल्पकर्ता ईश्वर शरण महाराज जी लगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । महोत्सव मूल समारोहका अध्यक्ष अर्यालको अध्यक्षतामा भएको समापन कार्यक्रमको संचालन महासचिव लोकेन्द्र निरासीले गरेका थिए ।
निसीखोलामा बालबिबाह रोकथामका लागी जनचेतनामुलक अभियान सुरु !